Maitiro ekumisikidza zoom pane iyo Apple Watch | IPhone nhau
Maitiro ekumisikidza zoom pane iyo Apple Watch
Jordi Gimenez | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Rimwe remabasa atinawo mu Apple Watch ndiko kushandisa zoom. Nesarudzo iyi yakamisikidzwa tinokwanisa kuona izvo zvakawedzeredzwa zvirimo pachikona diki cheiyo wachi uye vese avo vane dambudziko rekuona kana vakura, vachakwanisa kunakirwa nezviri mukati nekuda kwesarudzo iyi.
Isu tato taura pakutanga kuti iyi sarudzo inomiswa seyakajairwa muApple Watch, saka isu tichafanirwa kuimisikidza kana tichida kuti skrini iwedzere kukura. Mupfungwa iyi tinofanirwa kutaura nezve mabasa maviri, iro re shandisa zoom uye izvo zve dzora zoom.
Saka ngatiendei muzvikamu titange nechakakosha chinhu mune ino iri chaizvo shandisa zoom. Kune izvi, mune ino kesi, vashandisi vari pawatchOS 6 kumberi vane sarudzo yekumisikidza zoom nenzira inotevera.
Chekutanga tinogona kuzviita zvakananga kubva kuApple Watch pachayo, saka ngatiendei kuapp Zvirongwa> Kupinda> Zoom uye isu tinoshandisa sarudzo. Izvi zvinogona zvakare kuitwa kubva ku iPhone, kupinda muchishandiso zvakananga Tarisa> Kuwanikwa> Zoom uye isu tinoshandisa sarudzo. Neimwe nzira kana imwe, nhanho yekutanga iri chaizvo iyi, yekumisikidza sarudzo zvese kubva kuApple Watch pachayo uye kubva kuiyo iPhone.
Isu tinodzora sei Zoom pane yedu wachi
Rimwechete seta iyo yekuwedzera zoom level tinogona kutanga kuishandisa pane yedu Apple Watch. Zvakanaka, iyi ndiyo yechipiri sarudzo yatinofanira kufunga nezvayo. Kuti tishandise Zoom pane yedu wachi, zvese zvatinofanirwa kuita kudzvanya-penda pairi chidzitiro neminwe miviri uye iyo skrini ichawedzera munzvimbo iyoyo kusvika pakakwirira patakatara.
Tinogona scroll the screen neminwe miviri uye nekuda kweizvi isu tinongofanirwa kudhonzera kunzvimbo yatinoda kuona. Zvine musoro iwe unogona zvakare kushandisa iyo dijiti korona kupururudza peji rese kubva kuruboshwe kuenda kurudyi uye kumusoro kumusoro.
Para chinja kukura tinofanirwa kupomba kaviri nekubata nezvigunwe zviviri tobva tatsvedza zvigunwe kumusoro kana pasi pachiratidziri. Tinogona kushandisa idzi sarudzo mune akati wandei asi kana iwe usina matambudziko ekuona izvi hazvisi zvako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekumisikidza zoom pane iyo Apple Watch
Ivo vanozowedzera muganho wekubhadhara kuburikidza neasina kuonana
Apple Music inotangisa runyorwa rwekutanga nemimhanzi kutibatsira kusimuka